Ranomasina Baltika - Wikipedia
Ny ranomasina Baltika dia ranomasina iray eo amin'ny faritra Avaratr'i Eoropa. Ny firenena manana amorontsiraka amin'ny ranomasina Baltika dia i Alemaina, i Danmarka, i Rosia, i Soeda, i Finlandy, i Litoania, i Estonia, i Letônia ary i Polonia. Zato tapitrisa no isan'ny mponina miaina manodidin'ny Ranomasina Baltika.
Ny ranomasina Baltika (sarin'i NASA)
Ny ranomasina Baltika tamin'ny voalohany, dia velaran-dranomamy lehibe vokatry ny fitsonihan'ny ranomandry nandrakotra an'i Eoropa Avaratra tamin'ny Vanimpotoan'ny Ranomandry farany 10 000 taona lasa izay. Tsy nikasika ny ranomasina ilay velaran-drano tamin'ny voalohany. Nivadika ranomasina ny ranomasina Baltika tamin'ny faran'ny Vanimpotoan'ny Ranomandry.
Ranomasina Baltika ao Eoropa
Ny ranomasina Baltika dia atao hoe farihy proglaciaire tamin'ny andro taloha. Nivadika ranomasina ny ranomasina baltika tamin'ny fialan'ny ranomandry ary ny fiitatry ny tany manodidona (antsoina hoe izôstazia, izany hoe miitatra ireo tany voapotsitra rehefa tsy voapotsitra intsony).
Ny velarantan'ny ranomasina Baltika dia 450 000 km2 raha isaina ny Kattegat.
Ny hasiran'ny ranomasina Baltika dia 10 g/l. Izany hoe ampahatelon'ny salan-kasiran'ny ranomasimbe rehetra eto an-Tany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranomasina_Baltika&oldid=973706"
Dernière modification le 31 Aogositra 2019, à 10:49
Voaova farany tamin'ny 31 Aogositra 2019 amin'ny 10:49 ity pejy ity.